Mpangalatra kamio 6 no voasambotra - Madagascar-Tribune.com
jeudi 2 avril 2009 | Rakotoarilala Ninaivo
Voasambotr’ireo Zandary ao amin’ny Brigade Fenoarivo, ireo olon-dratsy miisa 06 nangalatra kamio iray teny Fenoarivo ny alahady 29 marsa. Niray tsikombakomba tamin’ireo olon-dratsy ny mpiambina ity fiara ity.
Efa tena maty paika avokoa ny tetika hamoahana ny fiara satria efa vita daholo ny taratasy sy ireo laharana vaovao saika apetaka aminy. Vola 2 tapitrisa Ar no nifanarahan’ny mpangalatra sy ny mpiambina, ary dia nisy mihitsy ny taratasy nataon’ny roa tonta amin’ny fandraisana io vola io.
Telo mirahalahy mpiray tampo no tompon’antoka tamin’izao halatra izao, miampy mpiambina mivady ary mpanelanelana roa. Saika efa tratra avokoa izy ireo ankehitriny, ankoatr’ireo mpanelanelana roa izay mbola karohina. Marihina fa nampiasa mini-bus ireo mpangalatra saingy nandositra ny mpamily rehefa raikitra ny fifanjevoana tamin’ireo zandary saika hisambotra azy. Voasambotra ihany moa ity mpamily ity.
Tratra niaraka tamin’ilay mpiambina ihany koa ireo ody gasy maro isan-karazany nolazainy fa fandemena ka mahatonga ny olona hanaiky izay lazainy.
Anio alakamisy 2 aprily no hatolotra ny fitsarana ny raharaha. Ny Zandarimariam-Pirenena dia manentana hatrany ny tsirairay hiara-hiasa, hampandre haingana azy ireo manoloana ny tsy fandriampahalemana misy ankehitriny.